The fariin dagdag ah SMS-dhaqameedka si degdeg ah aad ku noqon qadiimka ah, gaar ahaan iyada oo qaraxa ka mid ah si fiican u yaqaan, si fudud-faa'iideysan warrami codsiyada. WhatsApp, telegraam, dir, Line iyo codsiyada kala duwan oo dhan bixiyaan wargeliyo content lacag la'aan ah. Waxa kale oo aan habase yeeshee wuxuu ku yidhi doorasho ee cod, video iyo document qaybsiga macaamiisha kala duwan, Goldogob SMS aad kii iyo eedeeyay wac si buuxda. Fiiri codsiyada lagu wargeliyo qaadi karo ugu jecel yahay.
3. Line (Free)
1. WhatsApp (Free download, $ 0.99 / sanadka)
Waxaase yaab leh Mudanayaasha fudud, barnaamijkii tallaabadaas la xiriir aad telefoonka iyo element ah hodan, dareemi waayo-aragnimo oo lacag la'aan ah oo dhan ku soo biiraan si ay u sameeyaan WhatsApp codsi rogaal ku baahday qaadi karo fariimaha. Macaamiisha in xiriir ay WhatsApp diri kartaa content, sawirada, codka iyo fariimo gaaban video. Codsiga waxaa u baahan tahay faaiidada telefoonka, si aysan u qaadan doonaa kubad dhamaan qalabka. WhatsApp loo ogol yahay in ay isticmaalaan sanadka ugu horeeya, iyadoo kharash ah oo dhan $ 0.99 sanad kasta. The dhaw raaxadeeda waxa asaasiga ah, tiro badan oo ka mid ah qaybaha iyo ballaarinta macmiil ah oo ka badan 450 milyan oo qof oo caddaynaya sababta Facebook ayaa doonayay inuu bixiyo $ 19 billion si ay u hesho.
1. Waxaad shaki la'aan soo diri kartaa farriimo bilaash ah si ay gabal kasta oo adduunka ah oo la eedeeyay ma. Maamulka Tani gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah.
2. Easy in ay isticmaalaan qalab
3. Waxa uu leeyahay ma xayeysiis in aragtida screen Cad ah.
4. Waxaa dhoofista xiriirada ka telefoonka iyo in la helo kuwa ay ka faa'idaysanayaan Whatsapp.
5. Waxaad la asxaabtaada kula wadaagi karaa meesha aad degan tahay, sawiro, xaaladda.
6. Waxaad u baahan tahay lacagta kaashka wax ku qaataan martida ah iyo howl gabka aad Ehelkeeda.
1. Waxaad la hadli kartaa asaxaabta in kaliya ay leeyihiin telefoonada gacanta sare oo taageeraya codsigaaga iyo saaxiibbadiis isagoo rikoorkeeda ku Whatsapp. Waxaad si fudud u soo diri kartaa boqol farriimo bishii saaxiibbadiis oo aan lahayn Whatsapp ay telefoonka.
2. Waa in aad haysataa galo internetka u soo dirto oo aad hesho farriimo ah oo aan waxba iyo fariimaha waxaa intaasi dheer oo aan u soo diray inay mailkooda telefoonka.
3. Waa in aad bixiso $ 0.99 u recharging ka dib markii si joogta ah.
4. ma Waxaad wici kartaa codsigan isticmaalka in saaxiibbadiinna waxba.
5. profile sawirka waa dareemi si qof walba oo haysta Lambarka aad xiriirka iyo isticmaalka codsigan, haddii aad loo yaqaan ama aan.
Viber waa codsi kale Fariin waa wax adag tahay in la dhigay ilaa inta ay weli bixiya kale oo noocyo kala duwan ah. Waxaa sabab la'aan ku kalifay in ay ka weynayd kuwa agagaarka la PIN, sida Viber isticmaala lambarka telefoonka aad sida aad login, iyo codsiga kulan la haynta telefoonka aad maskaxda ku goolka dhamaadka si aad u bixiyaan qaar ka mid ah gargaarka la helo xiriir Viber-isticmaalka. Waxaad isticmaali kartaa arjiga si aad u soo diri content, stickers iyo emoticons, sawirada, codka iyo fariimo video ah oo aan waxba macaamiisha kale Viber, halka qayb cusub Viber Out idiin siinayo fursad uu ku soo wac lambarada aan Viber iyo telefoonka dhulka adduunka oo dhan (waayo, a la'aan). Kharashka waxa loo arkaa mid la soo iibsan in-codsiga, iyo wadarta tiirsan ku dul tahay meesha aad ka soo wacayso. Waxaad u baahan doontaa waxtarka kaarka SIM iyo telefoonka kor u taagaysa Viber.
1. sabab kalifaya No inay ugu biiriyaan, faa'iideysan lambarka telefoonka gacanta.
2. calls u ballaadhan lacag la'aan ah iyo fariimaha deg dega ah si ay macaamiisha kale Viber.
3. Farabadan fariimaha deg dega ah.
4. macmiil toosaa.
1. No yeedhay oo ka warrami in macaamiisha aan Viber.
2. Ma heli karo inta badan lagu daydo telefoonka oo ay ku jiraan Nokia, Symbian iyo wixii la mid ah.
3. Hoos u dhac oo tayo leh calaamadaha Wi-Fi ama 3G hooseeyo.
Line hadda brags taako guud leh in ka badan 300 milyan oo macaamiil. Codsiga Fariin Tan waxaa ku jira isku dhaf ah oo ka kooban oo ka kooban urur dhexdooda, samaynta isku dhaf ah soo jiidasho leh gudaha codsiga cidla ah. Macaamiisha u diri kartaa fariimaha content iyo codka lacag la'aan ah, waa toogan iyo wadaagaan sawirada mooshin gaaban, iyo sidoo kale ku baaqay in cod iyo video. A Tilmaamay Timeline Facebook-sida u fasaxaya macaamiisha boostada content, stickers, sawiro iyo xog goobta macaamiisha kala duwan, siinta lifelog orodka ah in ay xiriir Khadka aad.
1. Line haysan emoticons oo shurako ah, iyo sidoo kale waxa ay u yeedheen Warqadaha
2. stage Tani ma aha oo kaliya la heli karo ee telefoonada gacanta macruufka, Android, BlackBerry iyo Windows Phone, intaa ayaa codsigaaga Windows iyo Mac desktop.
3. Line fasaxaya calls cod taasi oo ka ladhay, sidaas darteed waxaan wici kartaa oo ku faqa wanaag la xidhiidhayna ka WiFi ama 3G.
Carqalad ayaa mabda 'Khadka waa in ay jirto xaqiiqda ah in ay horumarinta ayaa sanadkii lama ilaawaan ah nolosha aan weli caan noqotay ee Whatsapp, si hadda ay adag tahay in gebi ahaan wax Japan bedelay.
Iyadoo Microsoft ee Skype waxaa inta badan loo yaqaan waayo faaiidada video call oo cod, codsiga intaa gloats qaab qoraalka mid macquul ah oo xoog badan. Qaybaha qoraalka Skype ee la oggalaado in aad u soo dirto content, sawiro iyo fariimo xitaa gaaban video macaamiisha kale Skype habase yeeshee marka ay aadan internetka. Waxaa intaa dheer, macmiil Skype isticmaali karaa Credits Skype in ay wacaan si ay telefoonka gacanta iyo taleefannada guryaha. Iyadoo Skype ee qoraalka aan ficil ahaan waa xusid mudan, waxay qarinayaan saldhigyadii qumman, oo uu ku xidideystey kala duwan.
- Video hadal la kuwa jecel yahay
- App lagala soo bixi karaa gal iPhone iyo teleefonada Android
- Jaanqaadaan Mac iyo PC
- Foomka aasaasiga ah waa lacag la'aan
- Shaqo Ganacsi isticmaali kartaa nidaamkan ay u harsan tahay lacag caddaan ah
- International waxay ugu baaqaysaa lacag caddaan ah kharashka
- Dowladda suurto gal awood yaabaa mashruucan la awoodaha emeilku
- Kartida emeilku keeni ku saabsan inay surwaallo ammaanka
- Habkaan waxaa qalab kale oo looga faa'iideysan karo in lagu tormenting digital
- Waxaa loo baahan Wi-Fi ama 3G network si ay u ordaan
Telegraam waa codsi fariin waqtigan oo ay ku raran dammaanadda. Waxaa ku ballaarinayaan aasaaska ah in uu yahay qayb ka mid WhatsApp iyo qayb Skype. Sida Skype waa oo dhan iyo xataa uu leeyahay API ah si loo dhiso samaynta kartaa codsiyada iyaga u gaar ah.
Telegraam intaa leeyahay faa'iidooyinka ah isagoo xor ah everlastingly, didaan, oo soo saaray bulshada sare waa la qaadi karo. Waxaad ka heli kartaa si wada telegraam ka qalab kasta oo aad ku xeeran. The isdiyaari furan tusinayaan in injineerada sida of kulan ee barnaamijka hadda ka dhigay, codsiyada desktop iyo wax badan oo ka mid ah codsiyada boosaska badan si aad u sii la xiriira.
Hadda ma jiro codsi rasmi ah telegraam on Windows Phone. In kasta oo xaqiiqda ah in aan ku riyaaqayaa Migram ugu fiican. Waxay bixisaa xabbad leben ah soo Live, digniin, iyo qaybaha kala duwan si aad wargelinta.
Newcomer telegraam waa sida hadda hirarka. Waxaa gubtay ee cadeynayaan wakhti aan dheerayn dabadeed ayaa waxaa WhatsApp iibsaday by Facebook ee $ 19 billion oo doolar. Wax walba WhatsApp sameeya telegraam samayn karaa, si kastaba ha ahaatee waxa ay sidaas oo si weyn wax badan qaban kara. Waxaa balanqaadayo in ay lacag la'aan ah, ammaan iyo bixiyaan waxyaabaha uu ka kooban in ka badan kuwa beeleed ee ka mid ah xafiisyada dawladda snooping in wadahadalka. Habka in API uu u furan yahay qof kasta in la abuuro codsiyada waajibka ku ah inay sameeyaan waxa ay mashquuliya. Waxaad ka heli kartaa in telegraam on qalab kasta oo aad noloshaada! Taasi waa isku aadka wayn, aniga iyo waxaan jeclaan lahaa inaan arko telegraam qaado macmiilka
1. Fast iyo ammaan la sirta dhamaadka-to-dhamaadka
2. Is-soo rideynaa goosimo farriimaha
3. kaydinta buu u ballaadhan yahay qaybiyey
4. Isticmaal qalabka on fara badan
5. Video-gaadhsiin ilaa GB ah
1. Lamaanihii ee macaamiisha iyo haatan
2. No codka fariimaha
GroupMe for Windows Phone waa codsi u wanaagsan. Waxay soo bandhigaysaa riixdo digniin iyo leben ah Live. GroupMe diiradda ku siiyo marxalad Fariin laga cabsado in ay soo ururiyaa. Taasoo aan sameeyo waxa fiican ee isku duba wada.
GroupMe waa codsi cajiib ah wargeliyo qaadi karo ah. Waxaa qiimo leh war ururinta iyo waxa uu soo bandhigay qaali ah oo keenna Waayo, markii aynu samayn dalxiisyada sida Nokia Adduunka, dhisa, Waxaaad ama E3. Waxaa jira web macaamiisha ah, si kuwa dib guriga ma kulanka effortlessly nala hadli kartaa ka PC ee
1. Waxaa la gooyaa madal oo dhan ku baahsan
2. Waxay leedahay Iskudarka afargeesood oo meel awaamiir
3. Makin group wacaya kaliya la mid tuubada
4. dir wuxuu qoray iyadoo aan wax lacag xadka aad kii ee
5. nidaameed buug meesha aad telefoonka ee
6. Simple qaybsiga sawir
7. interface waa aasaasi ah oo fudud inay isticmaalaan
Dhinaca A caadiga ah in a "standard" content kulan waa in jawaabaha wax kasta oo loo soo diray oo keliya in ay diraha, iyo ka-faa'iideystayaal ah waa mid aan la hubin oo kale heshay fariin ah.
KIK muhiimad ahaan waa qashin on Windows Phone, taas oo ah dulli dhab weyn. KIK caan sabab ah in ay u baahan tahay in aad ku darto magacaaga screen asaxaabta la barbar dhigay tiro ka mid ah telefoon dhab ah. Taas ayaa ka dhigaysa KIK marxaladda Fariin uu jacel yahay, waayo, shirkigu kuwa dibadda ah ama kuwa aad u ma aad si fiican u ogaan weli.
KIK ma ahaa mid aad u xun on Windows Phone, si kastaba ha ahaatee, iyagu ma ay dib uqaabaynta codsiga in si dhab ah sano.
1. daacad ah warqadihiisa
2. Koox balaadhan oo ah macaamiisha
3. bannaana in soo bixi on teleefonada oo dhan
4. xubno ka xanibeen
5. Codsiyada uqaabaynta
1. macaamiisha xunxun
3. Hordhac shay munaasib ahayn
> Resource > Windows > Top 7-ada Rasuul for Windows phone